Ny Fitsarana Eoropeana dia mamoaka lalàna fa tsy Narcotic - CBD any Eropa
Ny Fitsarana Eoropeana dia mamoaka lalàna fa tsy Narcotic ny CBD
Ny Fitsarana Eoropeana dia namoaka didim-pitsarana fa tsy Narcotic, nanokatra varavarankely vaovao ho an'ny fanavaozana ny fitsipiky ny CBD any Frantsa sy eran'i Eropa ary mety hanery ireo mpitondra fanjakana hafa handinika ny fameperana efa misy mifandraika amin'ny vokatra azo avy amin'ny hemp ao amin'ny EU.
Ny tranga resahina dia ny tranga Kanavape frantsay malaza, nahatafiditra ireo talen'ny Catlab SAS roa, izay nenjehina sy nampandoavina onitra noho ny fivarotana Kanavape, vokatra vape iray amidy any Frantsa izay misy CBD nambolena ara-dalàna, nalaina ary natolotra avy amin'ny Repoblika Czech.
Ity Fitsarana Eoropeana ity dia nilaza fa rehefa jerena ny 'tanjona sy ny toe-tsaina ankapobeny' tamin'ny Fifanarahana tokana tamin'ny 1961, dia tsy tokony hoheverina ho zava-mahadomelina ny CBD satria ny CBD dia tsy "nisy vokany psychotropika na nisy vokany manimba ny fahasalaman'ny olombelona". Manaraka izany, nanapa-kevitra ny fitsarana fa tsy afaka mandrara ny fivarotana ny CBD vita ara-dalàna any amin'ny fanjakana mpikambana hafa ny fanjakana EU raha tsy hoe "miorina tsara" ny risika amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Ity ny lahatsoratra feno izay ny Fitsarana Eoropeana misahana ny lalàna CBD dia tsy Narcotic
FIVAVAHANA MISY: Vaovao stock stock cannabis
FIVAVAHANA MISY: Cannabis any Royaume-Uni
Momba ny raharaha Kanavape
Ny raharaha Kanavape dia niainga tamin'ny fifanolanana teo amin'ny Catlab SAS sy ny masoivohom-pirenena momba ny fiarovana ny vokatra ara-pahasalamana tany Frantsa tamin'ny taona 2014 momba ny varotra vokatra CBD vape izay nohafarana ara-dalàna tao amin'ny Repoblika Czech.
Tsy avelan'i Frantsa ny marketing ny vokatra azo avy amin'ny voninkazo hemp na ilay zavamaniry iray manontolo. Eo ambanin'ny kaodim-pahasalamam-bahoaka, voarara ny vokatra hemp iray manontolo. Ny vokatra farany avy amin'ny taho sy ny voa ihany no avela ary ny CBD novokarina avy amin'ny voninkazo hemp dia voafehin'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina, na dia tsy izany aza ny CBD synthetic.
Ity raharaha ity dia nampiakarina noho ny antony raha manohitra ny fitsipiky ny tsena tokana ny fisorohana ny fivarotana ny vokatra. Koa satria ny CBD nampiasaina tamin'ny vokatra dia nalaina avy tamin'ny hemp Czech efa lehibe ara-dalàna, dia natolotry ny Fitsarana ambony momba ny fitsarana any Aix-en-Provence ho an'ny Fitsarana Eoropeanina ny raharaha, mba hamoahana ny lalàna mifanaraka amin'ny lalàna frantsay sy eropeana amin'ity raharaha ity.
Hetsiky ny entana eropeana
Ny lalàna eropeana dia mametraka ny fivezivezena maimaimpoana ho an'ny entana ao anatin'ny Union, mitahiry raha tsy maningana toy ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ny zava-mahadomelina mahadomelina dia tafiditra ao amin'ity sokajy ity, izay azo atao ihany ny mivarotra sy mivarotra eo ambany fanaraha-maso henjana ho an'ny tanjona ara-pitsaboana. Ao anatin'ny didim-pitsarana navoakany, ny CJEU dia nandinika raha ny CBD azo avy amin'ny voninkazo hemp dia azo raisina ho toy ny narcotic amin'ny famaritana fifanarahana iraisam-pirenena - raha toa ka izany dia manan-jo handrarana ny fivarotana azy i France.
“Tsiahivina fa ny fivezivezena malalaka ny entam-barotra eo amin'ireo firenena mpikambana dia fotokevitra ifotoran'ny Fifanarahana FEU izay naseho tamin'ny fandraràna fameperana be loatra ny fanafarana eo amin'ny fanjakana mpikambana sy ny fepetra rehetra misy vokany mitovy”
Ny fitsarana koa dia nanambara momba ny fanapaha-kevitra mandràra ny marketing ny vokatra izay novokarin'ny fanjakana eropeana iray hafa ara-dalàna, nanapa-kevitra fa azo raisina irery izany raha toa ka misy ny tena risika voalaza fa momba ny fahasalamam-bahoaka.
"Ny fanapahan-kevitra handrarana ny marketing, izay tena vato misakana indrindra amin'ny varotra vokatra novokarina ara-dalàna sy novokarina tany amin'ny mpikambana hafa dia tsy azo ekena raha toa ka ny tena risika ambara ho an'ny fahasalamam-bahoaka dia hita fa miorina amin'ny antontan-kevitra siantifika farany azo amin'ny daty nananganana ny fanapahan-kevitra toy izany. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny tanjon'ny fanombanana ny risika izay hotanterahin'ny State Member dia ny fanombatombanana ny habetsaky ny voka-dratsy ateraky ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny fampiasana vokatra voarara sy ny maha-matotra ireo vokany mety hitranga (fitsarana ny 28 Janoary 2010, Vaomiera v France, C-333/08, EU: C: 2010: 44, fehintsoratra 89) ”
Fandikana ny hevitry ny fitsarana EU
Nanapa-kevitra ny Fitsarana fa handika ny raharaha manakana ny lalàna nasionaly izay mandrara ny fivarotana ny CBD novokarina ara-dalàna tany amin'ny mpikambana mpikambana iray hafa rehefa nalaina avy amin'ny zavamaniry Cannabis sativa manontolo ary tsy avy amin'ny fibra sy masomboly fotsiny, raha tsy hoe io lalàna io dia mety amin'ny fiarovana. ny fahazoana ny tanjona hiarovana ny fahasalamam-bahoaka ary tsy hihoatra izay ilaina amin'izany tanjona izany.
“Toa amin'ny tribonaly miresaka izany, satria ambany noho ny 0.2% ny haavon'ny THC ao amin'ny hemp amidy ara-dalàna any amin'ireo fanjakana mpikambana hafa, toy ny tranga amin'ny fizotran-kevitra lehibe, ny CBD dia tsy azo sokajiana ho 'rongony rongony'. Raha ny marina, araka ny didim-pitsarana tamin'ny 26 Oktobra 1982, ny vokatra iray izay aseho na eken'ny besinimaro ny maha-ratsy azy ary voarara ny fanafarana sy ny varotra any amin'ireo Fanjakana mpikambana rehetra dia azo sokajiana ho toy izany. ”
Mazava ny fanapahan-kevitra fa ny CBD dia naseho fa tsy vokatra manimba, izany hoe ny fandraràna frantsay amin'ny tanjony amin'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka dia tsy hanelingelina ny fitsipiky ny Vondrona Eropeana momba ny fivezivezena maimaim-poana.
Ny Fitsarana Eoropeanina misahana ny fitsarana CBD tsy Narcotic dia toa lasa lavitra lavitra noho ny fiatraikan'ny lalàna frantsay, mety hamporisika ireo mpanao lalàna hanova ny lalàna mifehy ny fambolena sy fanodinana hemp ho an'ny CBD io didim-pitsarana io. Mbola zava-dehibe kokoa, ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Eoropeanina dia mamorona fandikana mifamatotra amin'ny lalànan'ny EU ho an'ny fanjakana sy mpikambana ao amin'ny vondrona eropeana na dia tsy tafiditra tao anatin'ny didim-pitsarana manokana aza izy ireo, midika izany fa mihatra amin'ny firenena eropeana hafa izay misy fameperana CBD azo avy amin'ny hemp. .
Politika politika Marijuana